Daawo: Ra’isul Wasaare Kheyre oo Caawa Kulan muhiim ah la yeeshay Ra’iisul Wasaare ku xigeenka dalka Turkiga – Kismaayo24 News Agency
by admin 22nd February 2018 085
Muqdisho, Feb, 22, 2018— Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa caawa kulan soo dhawayn ah la yeeshay Ra’iisul Wasaare ku xigeenka dalka Turkiga Hakan Cawuşoglu, iyo wafti ballaaran uu hogaaminiyey, waxuuna Soomaaliya u yimid dardargalinta mashaaariic horumarineed oo dalkaTurkigu uu ka fuliyo Soomaaliya iyo xoojinta heshiisyo ganacsi oo ay wada galayn labada dawladood.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa dalka Turkiga ka codsaday in la fuliyo heshiiskii dhaqaalaha ee ay wada saxiixdeen labada dal iyo in bangiyada dalka Turkiga ay xarumo ka furtaan Soomaaliya iyo sidoo kale in la balaariyo xarunta ay Turkigu ku tobobaraan ciidmada Soomaaliya. Sidoo kale Ra’iisul Wasaare Khayre ayaa waftiga la wadaagay in ay ka caawiyaan habkii ay biyo xirayn ugu samayn lahaayeen Wabigga Shabeelle oo haatan qalallay.
Riisul Wasaare Khayre ayaa cadeeyay in shacabka Soomaaliyeed ay dadyowga kale ka dhawaystaan walaalahooda reer Turki, taasina ay tahay dareen ay ku abuurteen qalbiyada dadka Sooomaaliyeed, waligoodna ma iloobi doonaan sidii aad u garab istaagtayn wakhti ay dawladnimadoodu daciif ahayd.
Hailemaraim Desalegn :- Dadka Itobiya waxay ka cabanayaan waxba ka jira ….
Qaar ka mid ah Madaxdii ka qaybgali lahayd Caleemo saarka Madaxweynaha oo Muqdisho so garay..
Wasiirada Arrimaha Dibadda iyo Maaliyadda oo socdaal shaqo ugu Ambabaxay dalka Tunisia